Motor Magnetik mgbakọ - China Ningbo enweghị
Motor nju & Assembly Linear Motor nju - Neodymium Igwe Ọdụdọ Manufacturer Ningbo enweghị Magnetik Company. Linear adịgide adịgide magnet moto bụ ụdị nnyefe na nwere ike ịgbanwe a mechiri emechi ndọta ka ihe na-emeghe otu na-agbanwe electric ike n'ibu ume-akpụ akpụ na a ogologo akara enweghị ihe ọ bụla n'etiti akakabarede usoro. Main atụmatụ: 1. Ukwuu anabata na oru oma, nwere ike ịgbatị ihe ya ụzọ na-achoghidi mmezi, na ala ụzụ na-eji ire ụtọ ịkwa ike. 2 ...
Motor nju & Assembly
Linear Motor nju – Neodymium Magnet Manufacturer Ningbo enweghị Magnetik Company.
Linear adịgide adịgide magnet moto bụ ụdị nnyefe na nwere ike ịgbanwe a mechiri emechi ndọta ka ihe na-emeghe otu na-agbanwe electric ike n'ibu ume-akpụ akpụ na a ogologo akara enweghị ihe ọ bụla n'etiti akakabarede usoro.
1. Ukwuu anabata na oru oma, nwere ike ịgbatị ihe ya ụzọ na-achoghidi mmezi, na ala ụzụ na-eji ire ụtọ ịkwa ike.
2. nwere ike iru elu kpomkwem na ngwa nke ji kpachie oghere onye na-achị. Ọ nwere ngwa ngwa ọsọ na elu mee ngwangwa ọsọ na obere ngwa ngwa usoro.
3. na n'ọtụtụ ebe etinyere obodo ojiji, ụlọ ọrụ na agha.
Akwa-agba Rotors - Igwe Ọdụdọ Manufacturer Ningbo enweghị Magnetik Company
E wezụga na-adịgide adịgide nju, dị ka ndị ahịa 'pụrụ iche chọrọ, anyị nwere ike na-emepụta dị iche iche na iche iche nke mgbakọ ahụ, dị ka moto shei mgbakọ, elu-ọsọ rotors ma kpọmkwem stepper moto rotors. Anyị nwere ike inye gị na ụdị nile nke elu-ọsọ moto rotor na elu arụmọrụ, n'usoro ọsọ, nkenke na corrosion eguzogide. Ọzọkwa, ọ nwere ike na-ere na moto aro ọnụ. Na afọ ahụmahụ nke magnetik ngwa, anyị nwere ike na-enye kachasị ngwa plan nke magnetik ihe .
1. Ibelata ọsọ nwere ike iru 60000-120000rpm
2. kpọmkwem akụkụ
High-speed rotors na-mgbe etinyere moto na ụdị na-ulo oru brushless Motors, nke ndị mejupụtara na-adịgide adịgide nju (sintered neodymium nju, injection ferrite nju , o sie neodymium nju ma ọ bụ samarium cobalt nju) na ígwè biarin.
Energy-azọpụta, mfe imewe na miniaturization bụ uru nke PM moto mgbe tụnyere omenala moto. Ndị a mgbakọ nwere nnukwu torques na ala mkpọtụ. Anyị nwere ike kpọkọta axles, Kwadobe ígwé na rotors ọnụ ka mgbakọ.
Neodymium Magnetik njikọ Manufacturer -Ningbo enweghị Magnetik Company
Traditional couplings bụ niile na kọntaktị. Service ndụ nke couplers a na-ejedebeghị abrasion na ha nwere na-arụ ọrụ na-akàrà ọnọdụ, ma leakage na-mgbe na-kpatara ntụpọ nke ike akara. Magnetik couplings ịmụta na-abụghị na kọntaktị na-arụ ọrụ na uwe dabeere na magnetik njikọ ụkpụrụ, na ụzọ ọrụ ndụ na-ukwuu lengthened. Ọzọkwa, ndị a couplings iji static oru kama nke ike akara, nke ekwurịta nsogbu nke leakage.
Na afọ ahụmahụ na magnetik technology, na-adịgide adịgide magnet emeputa enweghị Magnetics Company Limited nwere ike inye gị na ọrụ ozi nke magnetik ngwaahịa. Ka ọ dịgodị, na ike nke onwe ha na-emepe emepe na-eme nnyocha na emebe, anyị nwere ike na-enye gị kachasị ngwaahịa aghụghọ na ngwa plan.
1. Non-kọntaktị magnetik couplings iji magnetik njikọ Ozizi
2. Static kara akara, elu kpọmkwem na arụmọrụ, ọ dịghị leakage
a magnetik couplings ike ga-eji na chemical na akwụkwọ-eme ọrụ, wdg
Ụgbọala bụ a dị nnọọ mkpa ngwa n'ógbè NdFeB magnet, ọ na-ekere dị oké mkpa ọrụ na ya, a otutu Motors na mmiri mkpa nju-eme ka ụgbọala mfe, echeta, ihe na ọzọ ala, na mma na mma ịnya ụgbọ ahụmahụ.
Previous: Waterproof Magnetik Button
Osote: AlNiCo nju